I-Apple ifumana iTuplejump, iNkampani yokuFunda kunye neArtificial Intelligence | IPhone iindaba
I-Apple ifumana iTuplejump, inkampani yokufunda kunye nobukrelekrele bokuzenzela
UAlejandro Cabrera | | Izaziso, Ezahlukeneyo
I-Apple isandula ukufumana inkampani yayo yokufunda ngomatshini wesithathu ukusukela ngo-2015, ukuthengwa kwenkampani esekwe eIndiya, iTuplejump. UTuplejump ujolise ekwenzeni lula iindlela zolawulo lwedatha kunye nokudala izixhobo ezenza kube lula ukujongana nezixa ezikhulu zedatha.
Isicatshulwa esivela kwiwebhusayithi engasebenziyo ngoku iTuplejump:
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, abantu baqonde ukuba umthamo wedatha oveliswa ziinkampani uya usiba nzima. Iseti entsha yeetekhnoloji yokuphatha eli nani likhulu ledatha. Sibe ngabokuqala ukwamkela obu buchwephesha 'bwedatha enkulu'. Iinkampani ze-Fortune 500 zinceda ukwamkela obu buchwephesha ngokukhawuleza, kwaye saqonda ukuba kunzima kangakanani ukufumana nokuba kulula kangakanani.
Ke yaqala ke inzame yethu yokwenza lula ubuchwephesha kulawulo lwedatha kwaye sibenze lula kakhulu. Sakha itekhnoloji ekulula ukuyisebenzisa, eyoyikekayo, kwaye iya kuvumela abantu ukuba babuze imibuzo enzima kulwazi olukhulu.
NgokukaTechCrunch, I-Apple ithenge iTuplejump ye "FiloDB" iprojekhthi yemithombo evulekileyo eyilelwe ukusebenzisa iikhonsepthi zokufunda ngomatshini kunye nohlalutyo kwixabiso elikhulu ledatha kunye nexesha langempela Kubonakala ngathi iFiloDB iya kuqhubeka njengeprojekthi yemithombo evulekileyo.
U-Apple ukuqinisekisile ukufunyanwa kukaTuplejump ngengxelo yesiqhelo: “U-Apple uthenga iinkampani ezincinci zobuchwephesha amaxesha ngamaxesha, kwaye zihlala zingathethi ngeenjongo zethu okanye ngezicwangciso zethu.
Olunye uqeqesho lokufunyanwa komatshini lwakutsha nje lubandakanya iPerceptio kunye neTuri. I-Apple isebenzisa ubuchule bokufunda ngomatshini kuyo yonke inkqubo yayo yokusebenza, Ukusetyenziswa kwetekhnoloji yeempawu ezinje ngokuqatshelwa kobuso kwiifoto, imowudi entsha ye "Portrait" kwi-iPhone 7 Plus, izixhobo eziphambili zeSiri, kunye nokunye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » I-Apple ifumana iTuplejump, inkampani yokufunda kunye nobukrelekrele bokuzenzela
UApple ukhupha uhlaziyo lokuqala lwe-iOS 10, iOS 10.0.2
U-Apple ucinga ngokuvula ivenkile yaseMzantsi Korea